पायल्स के हो ? पायल्सको उपचार कसरी गर्ने ? Piles Treatment in Nepali : पायल्स हुँदा दिशामा रगत आउँछ.पायल्सको घरेलु उपचार विधिले पायल्सको उपचार गरौँ.
पायल्स हाम्रो मल्द्वार मल्द्वार सम्बन्धित एक सामान्य र सबैको कमन रोग हो । पायल्स हुदैमा ठूलो रोग लाग्यो भनेर आत्तिनु पर्दैन । ध्यान दिन सक्यो भने यो पायल्स एक्दमै चाडै निको हुने रोग हो ।
रगत मा दिशा आयो भने सबै भन्दा पहिला तपाइले बिचार गर्न जरुरी छ कि रगत किन आयो? कसरी आयो? र कहाँ बाट आयो ? मल्द्वार बाट पायल्स को कारण ले आयो ? या पेट भित्र को अरु कुनै कारण ले आयो ? सबै भन्दा पहिला यो बुझ्न नै जरुरी हुने गर्दछ ।
दिशा मा रगत आउने पायल्स को कारण ले मात्र हुदैन । यदि तपाइको पेट भित्र आन्द्रा मा घाउ वा इन्फेक्सन भएको छ भने, आन्द्रा मा ऐजेरु पलाएको छ भने वा पेट को क्यान्सर भएको छ भने पनि दिशा मा रगत आउने गर्दछ । त्यसैगरी कहिले काहीँ तपाईंको दिशा साह्रो आयो ? गाउँ घर को भासामा भन्नू पर्दा गोटा पर्यो ? गोटा परेको दिशा सङ्गै के हि थोपा रगत जस्तो देखियो भने आत्ति हाल्नु पनि पर्दैन यो सामन्य समस्या हो । यो केही दिन नै दिशा पतालो आउन सुरु भए पछि आफै हराएर जानेछ ।
त्यसैले दिशा मा रगत आउदैमा आत्ती हल्ने र पायल्स भयो भनेर सोच्नु गलत पनि हुन सक्दछ । तर यदि दैनिक तपाइको मल्द्वार बढी चिलाउछ, दिशा गर्दा दिनहुँ पोल्छ र दिनहुँ के हि थोपा रगत आउँछ भने यो पायल्स भएको हुन सक्दछ । यस्तो भएमा तपाईंले घरायसी विधि अपनाउने वा डाक्टर कहाँ गइ चेकअप गरि यो समस्या को फाइनल कारण पत्ता लगाउन अति नै जरुरी हुन्छ । पायल्सको घरायसी विधि चै के के छन ? यसको बारेमा पनि यहाँ बताइएको छ । ध्यान पुर्वक अन्तिम सम्म पढ्दै जानुहोस । सबै कुरा थाहा पाउदै जानुहुनेछ ।
कब्जियत भनेको के हो?
भित्री पायल्स र बाहिरी पायल्स भनेको के हो ?
पायल्स हुदा के खाने के नखाने ?